M/weynaha Kenya oo maanta sheegay in Al-shabaab ay khatar ku yihiin ammaanka iyo dhaqaalaha Kenya. – Radio Daljir
M/weynaha Kenya oo maanta sheegay in Al-shabaab ay khatar ku yihiin ammaanka iyo dhaqaalaha Kenya.
Nairobi, Dec, 12 – M/weynaha dalka Kenya Mwai Kibaki ayaa mar kale maanta ku celiyey in ururka Al-shabaab uu khatar ku yahay ammaanka iyo dhaqaalaha Kenya, ayna taasi tahay sababta ay ciidamada Kenya u galeen dalka Soomaliya.
M/weyne Kibaki oo maanta ka qeybgalayey xaflad lagu maamuusayey maanlinta xorriyadda ee dalka Kenya oo ku beegnayd 12-kii Dec. 1964 oo ahayd maalintii uu dalka Kenya xorriyadda qaatay ayaa uga mahadceliyey dadka reer Kenya sida ay u taageereen hawlgalka ciidamadoodu ku galeen Soomaaliya.
Waxaa uu intaasi daray in sababta kaliya ee ciidamadiisu ay Soomaliya u galeen ay tahay sidii Al-shabaab looga badbaadin lahaa dalka Kenya oo ay khadar weyn ku hayaan, waxaana uu farta ku fiiqay in dagaalkani yahay mid ay si wadajir ah u fulinayaan dawladda Soomaliya iyo tan Kenya loogana gol leeyahay sidii loo wiiqi lahaa awoodda Al-shabaab.
Hadalka M/weyne Kibaki ayaa imaanaya iyadoo dhawaan uu ururka midawga afrika u ogalaaday in ciidamada Kenya ee jooga Soomaliya ay ku biiraan ciidamada Amisom ee nabad ilaalinta u jooga Soomaliya.